Sonika Lama, Singer (hot singer)
Topic: Sonika Lama, Singer (hot singer)
Author Topic: Sonika Lama, Singer (hot singer) (Read 5945 times)
« on: May 08, 2015, 02:58:14 AM »
गायिका सोनिका लामाको ‘पल-पल मरे’ भिडियो एलबम बजारमा
गायिका सोनिका लामाको ‘पल-पल मरे’ भिडियो एलबम बजारमा आएको छ । यस अघि थुप्रै पप एबम स्टेज गित प्रस्तुत गरिसकेकी सोनिका लामाको ‘सोनिका’ नामक एल्बममा समावेश रहेको गीतमा दिव्या लामाको शब्द रहेको छ भने रमेश खड्काको संगीत रहेको छ । सार्वजनिक ‘पल-पल मरे’ बोलको भिडियोलाई अनिल थापाले निर्देशन गरेका हुन् भने शिवराम श्रेष्ठले छायांकन गरेका हुन् ।
7भिडियोलाई प्रकाश तुलाधरले सम्पादन गरेका छन् । सार्वजनिक भिडियोमा बर्षा सिवाकोटीसँगै अन्य कलाकारहरुले पनि अभिनय गरेका छन् । भिडियोले बर्षाको प्रेमलाई देखाउन खोजेको छ । आफुलाई मन पराउने प्रेमी अर्कै तिर सल्केपछिको पिडा बर्षाले भिडियो मार्फत व्यक्त गरेकी छिन् ।
sonika lama 2.jpg (366.52 kB, 2304x3456 - viewed 220 times.)
sonika lama.jpg (263.38 kB, 1728x2592 - viewed 232 times.)
Re: Sonika Lama, Singer (hot singer)
« Reply #1 on: May 08, 2015, 03:00:33 AM »
सोनीका लामा संग को कुराकानी
सोनीका जी तपाई संगीत क्षेत्र मा कहिले देखि लग्नु भो ?
म यो संगीत क्षेत्र मा बि.स २०६२ साल बाट पर्बेश गरेको हु I
तपाई ले सांगेतिक क्षेत्र मा पर्बेश गर्नु को कारण अरु कुनै क्षेत्र थिएन ?
तेस्तो त होइन मेरो सानै देखिको सोख हो I
अहिले को सांगेतिक क्षेत्र कस्तो रहेको छ ?
सांगेतिक क्षेत्र मा छोड्न नि नसक्ने र अगाडि बढ्न नसक्ने गार्हो छ I
अनि मोडलिङ क्षेत्र मा पनि पर्बेश गर्नुपर्ने कारण?
किन अरु लाई चान्स दिने आफ्नो गीत मा आफै गर्न नि I
भनेपछि मोडलिङ क्षेत्र पर्बेश होइन आफ्नो गीत मा मात्र मोडलिङ गर्नु हुन्छ I
हो अरु धरै लाई चान्स दिइसकेकि छु अब को गीत मा म आफै मोडलिङ गर्छु I
अनि समय कसरी मिलाउनु हुन्छ संगीत र मोडलिङ क्षेत्र मा ?
यो क्षेत्र मा धेरै गार्हो छ समय मिलाउदै छु I
‘म त्यति लोकप्रिय छैन। म त चिनारी खोज्दै गरेकी नयाँ कलाकार हुँ।’ सोनिकाले पहिले बेसहारा नामक एल्बम निकालेकी थिइन् भने त्यसपछि आयो उनको ‘यो कस्तो यो जीवन’। यी दुई एल्बममा मात्र उनको गायकी क्षमता कैद भएन, त्यसपछि फेरि उनले निकालिन् तेस्रो एल्बम ‘सोनिकाको जवानी’। यस एल्बमबाट पनि सोनिका राम्रैसँग चिनिइन् साङ्गीतिक बजारमा। अब उनी आफ्नो चौथो एल्बम ‘सोनिका’ लिएर आउँदै छिन्। यसपटक सोनीकाको यो गीतमा लुकेको रहस्य
« Last Edit: May 09, 2015, 03:49:09 PM by tundikhel »